Thola izimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi eYurophu | Izindaba Zokuhamba
Izimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi
USusana Garcia | | Ukuzilibazisa
Yize sazi ukuthi uKhisimusi olandelayo ukude, iqiniso ukuthi siyathanda ukucabanga ngohambo esingalwenza, noma ngabe kusele izinyanga ezimbalwa. Yingakho sizokhuluma ngakho izimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi ezingatholakala eYurophu, ngoba kulelizwekazi lapho kugujwa khona ubuhle obuhle kakhulu nesiko elivela emhlabeni wonke.
I-Los Izimakethe zikaKhisimusi ziya ngokuya zithandwa futhi kuzo ungathola zonke izinhlobo zezinto, kepha ikakhulukazi umhlobiso nemininingwane ephathelene noKhisimusi nezinto ezijwayelekile zikaKhisimusi ezweni ngalinye. Ngakho-ke, uma sinethuba, akumele siyeke ukuya kwenye yezimakethe zikaKhisimusi.
1 IColmar, eFrance
2 IBolzano, e-Italy
3 IGengenbach, eJalimane
4 I-Graz, e-Austria
5 IBasel, eSwitzerland
6 EBrussels, eBelgium
Isifunda sase-Alsace sinamadolobhana abonakala engekho endabeni, okwenza kube ukuvakashelwa okuhle nganoma yisiphi isikhathi. Kepha uma ufuna ukujabulela uKhisimusi ngentelezi ekhetheke kakhulu, awukwazi ukuphuthelwa yifayela le- Imakethe kaKhisimusi kaColmar. Inani labantu likhonjiswe ngamalambu kaKhisimusi yonke indawo. Ukuhamba ezitaladini zalo kuba yinto yomlingo ngokuphelele. Kunezimakethe eziningana ezisatshalaliswa kumaphoyinti ahlukene. IMakethe kaKhisimusi yeSonto isendaweni yePaul des Dominicains, imakethe yabancane isePetite Venice. EPlaça Jeanne d'Arc kunemakethe enemikhiqizo ejwayelekile kanti esigodlweni sangesikhathi esidlule iKoïfhus kunemakethe yezinto zakudala.
Lona idolobha ebukeka medieval igubha Chirstkindlmarkt kusukela ekupheleni kukaNovemba kuya kuJanuwari 6. Imakethe itholakala ePiazza Walther futhi inezitebele ezincane ezinemikhiqizo ejwayelekile kaKhisimusi. Ngesikhathi semikhosi nangezimpelasonto indawo igcwele umsebenzi, njengoba kubanjelwa wonke umuntu ofana nababalisi bezindaba, amajuggler kanye namaculo kaKhisimusi. Kule makethe kunokuhlobisa okuningi ngoKhisimusi, kepha futhi kunemibono ethokozisayo yezipho, ubuciko kanye nemikhiqizo ejwayelekile ye-gastronomy yayo.
Leli dolobha elihle laseJalimane lisengxenyeni esentshonalanga yeBlack Forest. NgoKhisimusi kuvame ukuba neqhwa, ngakho-ke umbukiso ungaba mnandi kakhulu. I- Imakethe kaKhisimusi itholakala esigcawini sehholo ledolobha. Le makethe inesici esikhethekile sokuthi inekhalenda lokufika elikhulu kunawo wonke emhlabeni, eliboniswe engaphambili lomuzi wehholo ledolobha. Amafasitela aba yizinsuku zekhalenda, lapho kuboniswa khona izigcawu. Yimakethe enkulu ngokwanele, enezitebele ezingaphezu kwama-40
Imakethe kuleli dolobha ibizwa nge-Advent Market. Kuleli dolobha umoya kaKhisimusi uphila ngokugcwele, yize uqala ngoDisemba XNUMX, hhayi njengakwamanye amadolobha asevele awuthuthukisa ngesonto ngoNovemba. Le ndawo inezindawo eziningana ongazivakashela, ngaphezu kokuba nesimo esihle sokuthenga ngoKhisimusi. Kuhlelo IHauptplatz, okuyisikwele esikhulu sedolobha, inemakethe enkulu kunazo zonke. Ku-Glockenspielplatz kunemakethe ebekelwe imikhiqizo ejwayelekile yendawo. Imakethe endala kunazo zonke edolobheni itholakala esifundeni saseFranciskaner. Ngaphezu kwezimakethe, egcekeni leLandhaus kunesimo esimangalisayo sokuzalwa esenziwe ngeqhwa. Ehholo ledolobha baphinde benze ikhalenda elikhulu le-Advent ukuze idolobha lonke likwazi ukujabulela ukubalwa kweKhisimusi.
Imakethe kaKhisimusi kuleli dolobha ibhekwa njengenye yezindawo ezihamba phambili kulo lonke elaseSwitzerland, ngosayizi nekhwalithi. Kwenzeka kufayela le- Isikwele iBarffüsserplatz neMünsterplatz. Leli dolobha linedolobha elihle elidala elihlotshiswe ngesikhathi sikaKhisimusi ukwamukela izivakashi. Izitebele ezinhle ezigcawini ziyagqama, eziphefumulelwe ngamakamelo ajwayelekile asezintabeni aseSwitzerland ukunikeza konke okuthandekayo. Etafuleni ngalinye kunabachwepheshe abakhombisa imikhiqizo yabo ukuze sikwazi ukuthola izipho ezinhle nezingafani nezinye. Ku-Claraplatz kungenzeka futhi ukuthi uthole imikhiqizo ye-gastronomic, yabathandi bokudla.
EBrussels bathola uKhisimusi ngesitayela, ngakho-ke abantu abaningi ngokwengeziwe beza edolobheni minyaka yonke ukuzojabulela lezi zinsuku ngendlela ekhetheke kakhulu. Imigubho eyenzeka ngalesi sikhathi ibizwa ngePlaisirs d'Hiver, ukunikeza igama labo isibalo esikhulu semisebenzi nemibukiso eyenzekayo. I- Imakethe kaKhisimusi ibhabhadiswa iWinterWonders, ngalokho okubonakala sengathi sithuthela ezweni eliyiphupho. Kuyimakethe evula izindawo ezahlukahlukene zedolobha, inamadokodo lapho ungathenga khona izinto. ZiseGrand Place, kanye nesihlahla esikhulu sikaKhisimusi, ePeople de la Monnaie, ePiazza Santa Catalina eduze kwesondo elikhulu leFerris noma enkabeni yeBourse. Endaweni Yezingane ezijabulelayo, imindeni ingathola nokuzijabulisa kwabancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Izimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi
Izindawo zemetro Madrid
Umlomo Weqiniso, i-classic yaseRoma